Cranberry maina: tombontsoa fito lehibe | Nutri Diet
ny Cranberry maina, izay mety tsara raisina mandritra ny sakafo maraina, na serealy na irery, na ampahan'ny salady amin'ny mitataovovonana na amin'ny sakafo hariva, dia sakafo misy fananana mahaliana maro izy ireo.
Nahazo tamin'ny fomba mitovy amin'ny voaloboka (tsy ampy rano amin'ny ampahany blueberries vaovao, miaraka amina rafitra mitovy amin'ilay ampiasaina amin'ny voaloboka), manana fibre, vitamina ary Mahasalama, ka ny fihinanana azy dia maneho tombony maro ho an'ny vatan'olombelona:
Fisorohana ny homamiadana
Mampihena ny tahan'ny kolesterola amin'ny rà
Izy ireo dia miaro ny rafi-pitabatabana
Araraoty ny fifindran'ny tsinay
Sakano ny kapoka
Ahenao ny mety hisian'ny aretina mihasimba
Ny ampahany tsara indrindra dia ny, araka ny efa hitanao, ary tsy sahala amin'ny ankamaroan'ny sakafo resahantsika ato amin'ity bilaogy ity, ny fihenan'ny lanja dia tsy hita eo amin'ireo soa mba hampidirina cranberry maina amin'ny sakafontsika.
2 Kaloria amin'ny cranberry maina
3 Zatra mampihena lanja ve izy ireo?
4 Vola isan'andro
5 Mety misy cranberry maina ve ny diabeta?
6 Contraindications ny cranberry maina
Misy toetra marobe izay tsy maintsy asongadintsika amin'ny blueberry tsy ampy rano. Satria amin'ity fomba ity dia ho tsapantsika fa iray amin'ireo sakafo tena ilaina amin'ny sakafo io.
Ny Cranberry manatsara ny fahasalaman'ny nify, satria hanakana ny bakteria tsy hijanona eo amin'ny nifintsika izy ireo. Toy izany koa, hahazo siligaoma mahery isika.
Miankina amin'ny vitamina C, ary koa D, E, ary B.
Anisan'ireo mineraly asongadinay fa ny Potasioma sy ny Manezioma, vy ary phosforus.
Izy io dia antioxidant tonga lafatra. Araka ny fantatsika tsara, ny antioxidant dia tsy maintsy ao anaty sakafo voalanjalanja. Manampy amin'ny fisorohana ny fahanteran'ny sela izy ireo.
Misaotra an'i Mahasalama, hihatsara ny fahasalaman'ny masontsika. Ka io karazana blueberry io dia voalaza fa misoroka ny katarakta.
Kaloria amin'ny cranberry maina
Ny cranberry maina 100 grama dia manana kaloria 308. Amin'ireny, manana tavy 1,4 grama izy ireo, ary karibômatôra 82 grama, izay manaparitaka siramamy 65 grama sy fibre 6 grama. Tsy adino fa misy 40 mg potassium sy Sodium 3mg koa ao anatiny. Raha ny habetsaky ny proteinina ao amin'ireo 100 grama ireo dia 0,1 grama fotsiny.
Zatra mampihena lanja ve izy ireo?
Ny marina dia tsia. Miatrika ny iray amin'ireo sakafo misy fananana be sy tombontsoa lehibe ho an'ny fahasalamantsika izahay. Fa ao anatin'ny fanjifana tompon'andraikitra foana. Rehefa mihinana sakafo isika na te hihena, ny zavatra voalohany tsy tokony hialantsika dia ireo vokatra misy siramamy ireo. Ka ny cranberry maina dia misy azy ary be dia be. Noho izany dia tsy nanoro hevitra azy ireo isika rehefa manandrana mampihena ny lanjantsika. Tsy midika izany fa amin'ny andro manokana dia afaka mandray vitsivitsy amin'izy ireo isika. Tsy maintsy tsiahivina fa ireo tsy ampy rano dia manana kaloria 308 isaky ny 100 grama, raha misy blueberry nefa tsy maina, dia manana vitsivitsy Kaloria 50 manana siramamy 9,96 grama. Ka mahasalama kokoa io safidy io.
Na dia misy siramamy aza matetika ao amin'ny fizotran'ny tsy fahampiana rano. ny Cranberry maina Izy ireo koa dia iray amin'ireo sakafo tokony hodinihina. Manana fananana sy tombontsoa marobe izy ireo, raha laninay amin'ny fomba voalanjalanja.
Tsy resaka fanesorana ireo vokatra sasany amin'ny sakafontsika io. Saingy, haka azy ireo amin'ny habe kely kokoa sy amin'ny fomba voalanjalanja mba tsy hanovana ny zavamiaina misy antsika. Amin'ity tranga ity dia mandray antsasaky ny tanana foana isika ho refy (10 grama eo ho eo) fa tsy manisa tsirairay, raha misakafo. Raha tsy izany dia mety handany eran-tànana isika. Ho an'ny olona izay misotro matetika ity ranom-boankazo ity dia tsara kokoa ny tsy misotro mihoatra ny vera telo isan'andro.
Mety misy cranberry maina ve ny diabeta?
Marina fa safidy misy siramamy betsaka io. Noho io antony io, amin'ny ankapobeny, ny voankazo tsy ampy rano dia matetika apetraka, ary bebe kokoa raha diabeta ianao. Fa misy ny safidy toy ny voaloboka maina, alaina amin'ny sakafo ary amina habe kely dia tsara izany. Raha ny cranberry maina dia tsara kokoa ny manaraka io lalana io ihany. Hanavotra azy ireo amin'ny fotoana manokana isika ary handray vola kely. Afaka mitady vitsivitsy ianao marika tsy misy siramamy, na tsy misy siramamy miampy, satria ny ankamaroany no miloka amin'izy ireo. Tokony hotadidina fa manana flavonoid izy ireo izay mampihena ny fanoherana ny insuline.
Contraindications ny cranberry maina
Amin'ny fotoana rehetra dia miresaka momba izany ho sakafo misy fananana sy tombontsoa maro isika. Saingy tsy afa-maina amin'ny fanoherana izany koa. Satria misy azy ireo ary tokony ho fantatsika izy ireo:
El fahazoana lanja Iray amin'ireo fanoherana efa voalaza io. Ny marina dia rehefa manararaotra sakafo toy izao isika, feno siramamy, dia mazava fa afaka mihombo isika raha tsy mifehy ny fihinanana azy ireo.
Olana amin'ny vavony: Koa satria amin'ity tranga ity dia mifandray amin'ny fanjifana be loatra izany. Koa satria raha mitaky vola be isika, dia hahatsikaritra fanaintainan'ny vavony ary koa ny tsy fihinanan-kanina. Tokony hotadidintsika fa manankarena fibre izy ireo ary amin'ny alàlan'ny fanjifana ampy dia hahasoa antsika izany, fa raha tafahoatra loatra isika dia ho hitantsika ny mifanohitra amin'izay. Izy io dia mety hiteraka gastritis.
Ary, na dia atokana ho an'ny lafiny maro amin'ny fahasalamana aza ny fanjifana azy tsy tapaka (hita taratra amin'ny lisitra etsy ambony), dia tsy mitovy amin'izany ny lanjany. ny blueberries Ny maina dia tokony alaina amin'ny antonony raha te hitandrina ny laharana ianao, satria manana kaloria avo lenta isan-jato izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Ny tombony fito amin'ny cranberry maina
Maria Delia Perdomo Mendez dia hoy izy:
Tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny cranberry maina nohanina isan'andro. Mba hisorohana ny aretina urinary. Nividy ny voaloboka maina aho fa tsy fantatro hoe ohatrinona na ahoana no tokony handraisako azy. Misaotra betsaka mialoha ary MIARAKA AMIN'NY PEJY
Valiny tamin'i Maria Delia Perdomo Mendez